River View Point Tower မှ​ရောင်းရန်​ရှိသည်​ ။ - ရောင်းရန် - အလုံ (Ahlone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,300 သိန်း (ကျပ်) - S-3116524 ::: iMyanmarHouse.com
27 Jul 2016 12:26 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်
7084 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
TOWER (A) တွင် အခန်းနံပါတ် - 905 , 1205 နှစ်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည် ။
TOWER (B) တွင် အခန်းနံပါတ် - 406,606,804,803,702,801 အခန်းများရောင်းရန်ရှိသည် ။
1MBR , 2BR , Store , Kitchen , GYM , swimming Pool , Child Play Ground , Car Parking , Pure Water , Fire Alam , Internet Fees 15000ks , Maintainent Fees 65000ks . 1950sqft , 1sqft >180000ks .
River View Point Tower
သစ်​​တောလမ်း နှင့်​ ကမ်းနားလမ်း​ထောင့်​ ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။